Tandremo ry Zanakavavin’Ilay Mpanao Didy Jadona Tao Però, Tsy Mila Anao Hilatsaka Ho Filoha Ireo Mpanao Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Anna Bjorklund
Voadika ny 06 Avrily 2016 8:32 GMT
Mpanao fihetsiketsehana namory vahoaka tao amin'ny Keiko Fujimori. Sora-baventy hoe “Aza mangalatra , ajanony ny lainga. Keiko dia mpihatsara-velatsihy sady fahavalon'ny vehivavy” Fandikan-teny Quechua nataon'i @Suyakuq. Sary nozarain'i @patriciafloresr tao amin'ny Twitter.
Nampiantrano hetsi-panoherana goavana roa tamin'ny fiandohan'ny volana marsa i Lima, renivohitr'i Però, manao ho lasibatra ny kandidà Keiko Fujimori -ilay zanakavavin'i Alberto Fujimori filoha teo aloha mampiady hevitra, izay voampanga 25 taona an-tranomaizina noho ny kolikoly sy ny heloka bevava nataony tamin'ny olombelona. Nisy ihany koa ny hetsi-panoherana tany Tacna tanàna iray any atsimo, izay notsidihan'i Keiko tamin'ny 16 Martsa tamin'ny fampielezan-kevitra nataony. Nahoana ilay kandida mitarika ao Però ity no mizaka fanoherana mahery vaika toy izao ?
19 ny isan'ny kandidà ho filoham-pirenena tamin'ny voalohany amin'ny fifidianana hotontosaina amin'ity taona ity, izay hitan'ny maro ho be loatra. Tamin'ny volana Febroary, voalaza fa kandidà roa no niala noho ny tsy fahampian'ny fanohanana. Tamin'ny volana Martsa, na izany aza, ny mpitsara Nasionalin'ny Fifidianana (JNE) dia nanala kandidà matanjaka roa. Voadaka tao amin'ny fifaninanana taorian'ny nahatratrarana azy nanolotra vola ny mpifidy ho anisan'ny ny fampielezan-keviny i César Acuña , raha nofoanana kosa ny firotsahan'i Julio Guzmán taorian'ny nanaovan'ny antokony fifidianana tsy ara-dalàna tamin'ny fanendrena azy voalohany.
Niteraka ahiahy tamin'ireo mpifidy izay voatery niparitaka ny hetsika nataon'ny JNE (indrindra momba an'i Guzmán, izay heverina ho manam-bintana amin'ny fahatratrarana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana).
Taty aoriana, nipoitra ny tatitra fa nisy didy fanilikilihana miantona ho an'i Keiko Fujimori ary nentina teo anoloan'ny JNE , satria izany dia noho ny antony mitovy ny tamin'ny an'ireo nitondra an'i Acuña. Ary noho ireo toe-javatra ireo no niatombohan'ny hetsi-panoherana goavana voalohany nanohitra an'i Keiko natao tamin'ny Alakamisy, 10 Martsa , tao an-tanànan'i Cusco. Ny fihetsiketsehana lehibe dia ampy hanerena ny kandidà hamarana ny famoriam-bahoaka, 15 minitra monja taorian'ny nanombohany.
Ciudadanos de Cusco hoy salen a expresar su rechazo a Keiko. #KeikoNoVa pic.twitter.com/hD97hWMWA6
Amin'izao fotoana izao, ny olom-pirenena ao Cusco dia midina an-dalambe mba haneho ny fandavana ny Keiko.Tsy mila an'i Keiko
Así echaron a #Keiko#Fujimori de la plaza de Santiago en #Cusco, donde realizaba su mitin.#Cuscoenportada… https://t.co/NPh461b7jo
Izao no fomba nandroahana an'i Keiko Fujimori avy ao amin'ny Santiago Plaza any Cusco, toerana izay namoriany vahoaka.
Ny andro manaraka, tamin'ny 11 Martsa , nanomboka nitranga ny diabe “ Tsy Mila an ‘i Keiko ” voalohany. Araka ny mpikarakara, natao ny fihetsiketsehana hidika “tsy hahavoafidy an'i Keiko sy itsipahana ny isan'ny nifidy azy rehefa mividy vato natakalo entana, izany hoe milalao ny fanantenan'ny Peroviana maro.” Nahomby tamin'ny fahazoana tanora an'anarivony ny hetsi-panoherana, tanora nidina an-dalambe mihiaka ny heloka bevava ny filoha teo aloha Fujimori.
Mahavalalanina ity sary ity!
“#Keiko, rata, estudia con tu plata”, Plaza San Martín #TachenaKeiko #keikonova pic.twitter.com/Lyf7VMjs4v
“Keiko voalavo nianatra tamin'ny volanay”, Plaza San Martín. Ahitsano i Keiko. Kizo i Keiko.
Andro vitsy taty aoriana, nitombo ny fahatezeram-bahoaka raha nilaza ny JNE fa tsy afaka manaporofo ny fiampangana an'i Keiko Fujimori, izany dia nitarika ny fielezan'ny fiampangana ny JNE ho mijery tavan'olona ara-politika. Mandritra izany fotoana izany, nisy fanangonan-tsonia vaovao homena ny JNE hanilihana an'i Keiko amin'ny fifidianana, milaza fa nanolotra vola sy fanomezana ho takalon'ny fanohanana amin'ny fifidianana, izay fandikana lalàna peroviana izy sy ny mpikambana aminy ao amin'ny fampielezan-kevitra.
Ny hetsi-panoherana tamin'ny 15 Martsa manohitra an'i Keiko any Lima ihany koa dia nangataka ny JNE hanilika an'i Keiko amin'ny fizotry ny fifidianana. Teo anelanelan'ny 4000 sy 20.000 ny olona nanatrika izany fihetsiketsehana izany.
#VIDEO Masiva marcha #KeikoNoVa en la avenida Wilson. Varias cuadras de ciudadanos manifestándose contra candidata pic.twitter.com/NHsc3cEVnq
VIDEO Diaben'ny “Kizo tsy azo aleha i Keiko” ao amin'ny Lalambe Wilson. Andian'olona manao fihetsiketsehana manohitra ny kandidà.
Miles, sí, miles de ciudadanos en las calles, marcha de repudio a #keiko y al .@JNE_Peru q la protege. #noakeiko pic.twitter.com/wfdrIy4148
An'arivony, eny, an'arivony ny olona eny an-dalambe nanao diabe amin'ny fanamelohana an'i Keiko sy ny JNE izay miaro azy. Tsy mila an'i Keiko
Nandritra ny taona 2015 sy mankaty amin'ity taona ity, dia nanana ny 30 isanjaton'ny fanohanan'ny mpifidy i Keiko. Nisy fitsapan-kevitra vitsivitsy mihitsy aza nanohana hatramin'ny 37 isanjato. Milaza ny mpandalina sasany fa mety manatsara ny fampielezan-keviny ny fihenan'isan'ny kandidà. Koa nahoana ankehitriny ny firotsahan'i Keiko no mahatonga ny fanaovana hetsi-panoherana manan-danja manohitra azy (sy ny lova navelan'ny rainy), nahatonga fiaraha-mientan'ny ankavia, ny mpikatroky ny ady amin'ny kolikoly , ary ireo tsy mbola tapa-kevitra amin'izay hofidiana?
Andaniny, vao maika mampitombo ny fanatevenan-daharana ireo mpitsikera azy i Keiko amin'ny fitsikerana ampahibemaso ny hetsi-panoherana ho tsy demokratika ary nokarakarain'ny mpampihorohoro. Tsy menatra ny mampiasa fiantsoana anarana [manivaiva] ihany koa i Keiko:
Tsy afaka hanaiky ny herisetra manohitra ny fampielezan-kevitra izahay. Tsy hijanona na hampiato lanonana noho ny vondron'olona tery saina izay tsy mitovy hevitra aminay koa izahay.
Keiko miteny ” vondron'olona tery saina”, Dardo López miteny “fasista sy komonista”, ary i Becerril miteny “havana voalohan'ny mpampihorohoro ireo.” Wow
Tsy mamokatra ny valin-teny toy izany, mamelombelona ny fahatsiarovan’ ny olona maro ny didiko fe lehibe nataon-drainy. Izay nosoratan'i Claudia Cisneros mpanao matoandahatsoratra:
Velona ao amin'ny Keiko ny politikan'ny Alberto Fujimori amin'izao fotoana izao: fihoaram-pahefana mitovy, tombontsoa mitovy, horohoro mitovy, ary mananontanona toy ny tamin'ny taona 90 ny fanaraha-maso ny asa fanaovan-gazety .
Tena tsy fantatra izay hitranga amin'ny herinandro maromaro manaraka, na dia efa azo antoka fa hahafeno fepetra hahatafidirana amin'ny fifidianana fihodinana faharoa i Keiko (farafahakeliny 51%n'ny vato no ilaina hahazoana fandresena amin'ny fifidianana amin'ny fihodinana voalohany). Mbola tsy mazava hoe iza no hiaraka aminy any amin'ny fihodinana faharoa, fa izay kandidà mety handresy nefa dia hiantehitra amin'ny fandresen'ny mpanaratsy isan-karazany an'i Keiko .
Mandritra izany fotoana izany, tsy mijanona miovaova ny fomba fijery ny fizotry ny fifidianana. Tamin'ny 16 Martsa, ohatra, dia nanapa-kevitra ny JNE fa tsy maintsy nesorina i Vladimiro Huaroc, mpiiray lisitra amin'i Keiko ho filoham-pirenena, satria nividy vato tany amin'ny faritra Junín. Izany fanapahan-kevitra izany dia mety ho azo akarina eny amin'ny fitsarana.
Tsy mitsahatra ny mpanao fihetsiketsehana, ary nomanina manerana an'i Però amin'ny 5 Aprily, ny faha-24 taonan'ny “Fanonganam-panjakana ny tenany” ny diabe manohitra an'i Keiko rehefa avy nanafoana ny kongresin'ny firenena sy ny fitsarana ny Filoha Alberto Fujimori ary nandray feno ny fahefana fanaovan-dalàna sy fitsarana.
Ny orizinaly amin'ity lahatsoratra ity dia nivoaka tao amin'ny bilaogin'i Juan Arellano, Globalizado.